Coulda Na Me Lyrics — njem Lee
Ikwu isi ọdịnaya
Coulda Na Me Lyrics
Ọzọ vocals site: J. Paul
sere site: Alex Medina
Weere na mụtara site: Jacob “Biz” Morris
Unu dịghị onye wanna-anụ mwute anyị
Nke ahụ bụ otú m ka mgbe m na-ịpịgharị site na ha Twitter comments, niile m na-eche bụ mmiri ozuzo
Ha na-agwa m aka na ọ bụ agadi
Na stof adịghị adị ọzọ
Ma na-adịghị iba ezi mgbe m anya na a n'okporo ámá
Ya mere, ọ bụ ezigbo mgbe m na-eche dị ka ọ coulda kemgbe m
Man m nwere ike ịgwa gị ihe ndị na-eme m ugbu a
Ah ha Wanna maara otú eme m ka ugbu a
-Adị m ka ọ coulda kemgbe m
Anyị niile mere anyị n'onyinyo Chineke ka ị maara
All ndụ anyị mkpa, anyị ọhụụ bụ mebiri
Anyị na-eche ihe mgbu na-akpata anyị nọ n'ebe a n'iru
Onye bụ onye aka ya dị ọcha m na-amaghị
Ma, ọ coulda kemgbe m
Amaghị m Mike Brown
M na-amaghị Trayvon
Amaghị m Sean Bell
Ma, m maara na ha esiwo
M na-amaghị Oscar Grant ma ọ bụ Tamir Rice
Amaghị m Eric Garner
Ma, m maara na ha ndụ
Na oké ọnụ karịa ha si na tv ihuenyo
M asị m nwetara ogologo ndepụta, ị finna ahụ m mkpu
Ka M na-eche dị ka ha na-adịghị ahụ anyị eze
Na-achị ka Ya, ha na-eche na anyị nọ ná mkpa na fiends
Anọghị m n'ebe ahụ mgbe ha gbara nwoke
M na-apụghị idozi ọnọdụ, agaghị na-ekwu na m nwere ike
Ma m maara ndụ dị ka a na-eto eto nwa nwoke
Echere m ike ịbụ ara nke na ụfọdụ na-adịghị aghọta
Ma eleghị anya, ị ga-
Ọ bụrụ na ị ele anya na ndụ m na ị guzo ebe m guzo
Jiri anya m anya na a n'okporo ámá
O na-adị mgbe m na-eche dị ka ọ coulda kemgbe m
Weregodị m dị ka a n'afọ iri na ụma
Ịchọpụta ọṅụṅụ na ụlọ ahịa mgbe m hụrụ
Onye okwu ugwo na-achọ na m, mgbe ahụ ọ olu ike
Ezo na m hip na-agwa m na m na hụrụ
Ma chere, M na-amaghị na m bụ na egwu
Na m na-amaghị na m nwere ike gbaa gị na a blackberry
nnọọ iberibe, na ya hụrụ m dị ka a agboro
Mgbe m ga-dịghị mgbe jidere a ikpe, mgbe zuru ma ọ bụ zụta ọgwụ ọjọọ
Ma ọ bụ otú n'obi bụ oge m ama efe aka a show
Full nke ọṅụ, finna RAP bụ maka ime ụlọ jupụtara folks
N'èzí mgbe ahụ m na-ahụ na ọ bụ a egbe na irum
Hankoofu on aka m, Pat ala n'úkwù
Ọ bụ otu ihe Ol, otu Ol
M kwekọrọ ná nkọwa nke a mpụ na ha maara
Ha gwara m picture, Bịanụ
Ị na-egwu egwu? Anyị na-adịghị anya a ka
Ọfọn cops chere na anyị mere ma ọ bụrụ na ị na-achọ nri
Kwa nwa nwoke m maara
Nwetara akụkọ ndị dị ka ndị, aghọrọ ihe ha na-agaghị agha
Mgbe ha iche ị a agboro si na-awụlikwa elu
Ọ na-adịghị mkpa na ọ bụrụ na ị na kere na a gbaputa mmiri
Lee, amaghị m ma ọ bụrụ na Mike Brown nwere aka ya
Ma na m na-ede si homie I'ma ebili
Na I'ma-agwa gị na-adị m ka m anya na a n'okporo ámá
Na-ekwu na ọ bụ ezigbo mgbe m na-eche dị ka ọ coulda kemgbe m
Mbara igwe na-eche na agba ntụ, anya red
Nwa ọcha na-enwe nsogbu, ígwé ojii n'elu isi
Ogologo oge ole ruo mgbe ha nụrụ ihe anyị kwuru
Ogologo oge ole ruo mgbe ha na-anụ ihe m kwuru?
Kpọpụta okwu ka ihe ọma niile cops
Alụ ọgụ ọjọọ ụmụ okorobịa, -eme ezi akwụsị
M asị na on hundu blocks
Na ọgwụgwụ ha nwere ike ime akpụ ị na na niile crooks
I wanna asị m niile na-eto eto nwa ikom
Amaara m na ọ na-enwe mmetụta dị ka anyị nnọọ ike imeri
Ma na iwe gị na-adịghị emehie
Adịghị ikwenye ihe ha na-eche echiche
Ekwela ka onye ọ bụla ghara agwa anyị na anyị na-adịghị nwetara uru
Ụfọdụ ga na-agbalị mechie anyị ala ya ga-arụ ọrụ
Amaara m na ọ dịghị mma, ma anyị maara na ọ na-eche banyere
Na otu ụbọchị ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri
Ebe bụ olileanya unu na? Nke m bụ n'ime ya
Olee ebe ihe i olileanya na? Nke m bụ n'ime ya
Anyị ọkọdọ na-arụ ọrụ ime, ma m olileanya n'ebe ọ nọ
Ha nwetara ọrụ ime kwa, ma m olileanya n'ebe ọ nọ
0 0	mbak
aha: Coulda Na Me — njem Lee
Jordan • December 4, 2014 na 12:53 Abụ • zaghachi
M na-ahụ ụfọdụ isi ihe mere na lyrics, na m maara nke a song bụ onye, ma ọ dị ka ọ bụ a song nke ahụ na-enye na nke a na ogbaaghara.
The abụọ na ngalaba nke 3rd amaokwu, na-ekwu okwu banyere ịbụ patted, n'ihi na o “ọkụ” nkọwa nke mpụ. M na a na patted ala, na n'akụkụ nke interstate mgbe a tailed maka 3 kilomita, n'ihi na m na-eyi a beanie na a sweatshirt mere ka m anya dị ka m bụ site sie n'akụkụ obodo. Ọ bụghị naanị na, ma m na-akwọ ụgbọala Nna m ochie impala na papa m na njem oche, na ha na-enyocha anyị akụkọ banyere anyị na-aga azụ si obodo Apple ụlọ ahịa na ebe m kwụsịrị m MacBook ka ofu. Na-akpọ ya àgwà, na-akpọ ya ihe ọ bụla, ma, ọ bụ ihe ọ bụla ma na agba nke m na akpụkpọ. Otu ọfịsa na-acha ọcha, nke ọzọ na nwa. Nke ahụ bụ m.
First akara nke mbụ amaokwu: “Unu dịghị onye wanna-anụ mwute anyị”. Mara mma n'aka na m maara ihe ọ pụtara. The okwu “anyị” na nkebi ahịrịokwu, m na-ele ka nkewapụ si song, dị ka m na-agaghị aghọta ihe na-alụ bụ, ma ọ bụ otú ị na-eche. M nwere ike ọ gaghị enwe ike ịghọta, ma Chineke nyere m na-esi na-akwado, site Ekpere.
Ịga n'ihu na na echiche, “Anyị niile mere anyị n'onyinyo Chineke ka ị maara”. E nwere dum counter na song. Chineke kere anyị n'onyinyo Ya, na ọ dịghị agba, nkwarụ, okike ma ọ bụ si of mba mgbe mere Chineke anya ọ bụla n'otu n'otu O kere ọ bụla dị iche iche, Ya mere, gịnị ka anyị kwesịrị? Gịnị mere m ga-ele anya na onwe m ọ bụla dị iche iche si ị, na Anglịkan?
M nwere ike inwe n'ihu, ma m na-eche m na kwuru ezuru. njem, dị ka a na-eso ụzọ Kraịst na anyị na-eyi na anyị nwere okwukwe, anyị adịghị anya na onye ọ bụla ọ bụla dị iche iche ma ọ bụ na-emeso ha dị iche iche. Anyị tụfuo Self, na-elekwasị anya na-etinye anya na Ya, na n'agbanyeghị otú onye ọ bụla n'ime anyị na-ele, mgbe anyị na-ekwu na anyị bụ Ndị Kraịst, ụzọ anyị na-eme na ihe anyị na-ekwu na-egosi otú ndị mmadụ na-ahụ Ya site anyị. Ya mere ọ bụrụ na ọ gaara ị, ka m kwesịrị-ele gị anya ọ bụla dị iche iche? Gịnị ma ọ bụrụ na ọ bụ m?
My na-ekwu bụ, ibu “Colorblind” n'ụwa a.
Tory • December 4, 2014 na 10:13 Abụ • zaghachi
Nwanna Jordan, m nwere ike dị nnọọ na-egosipụta na “colorblindness” abụghị azịza ndị a okwu? Ka m ịgbanwee ya ngwa ngwa si agbụrụ okike. Ikom na ndị inyom dị nnọọ iche, na na bụ ihe dị mma! Iji- “okike ìsì” ga-abụ nnọọ detrimental, n'ihi na ọ ga-ndammana ebipụ mkpa anyị iche, na-eme ka anyị na-atụ uche si na Chineke. Ihe m pụtara na nke ahụ bụ na dị ka mmadụ, ebere nēche bụghị-abịa dị ka ndammana dị ka ọ na-eme n'ihi na ndị inyom (achọpụta na okwu nēche!). Ọ bụrụ na anyị na-ele anya na ndị mmadụ, anyị ga-atụ uche si na ebere nke Chineke. Anyị ga na-agụ banyere ya, ma hụ dịghị tangible, mmadụ atụ nke ebere Ya (M maara na m na-ekwu okwu na ike ike n'ozuzu, ma naanị-eme ka a onu).
Race bụ otu ụzọ. Anyị bụ n'ezie ndị dị nnọọ iche, ndammana! ojii, Asians, ọcha, Hispanics, anyị na-emekarị nnọọ dị iche iche na anyị worldview, mmadụ, omenala, etc. Nke a bụ a mara mma ihe. Site na-achọ na onye na omenala ahuhu ọzọ, anyị pụrụ ịhụ na Chineke bụ a omiiko Chineke (omiiko banyere nri ihe). Site na-achọ na onye na omenala nke “ewe iwe ọsọ ọsọ(ness),” anyị pụrụ ịhụ na Chineke bụ enwere anyị ndidi, na-adịghị ewe iwe. Site na-achọ na n'obodo dị iche iche, anyị n'ezie esi na-ahụ ọtụtụ foto nke Chineke.
enweghị ajụjụ, anyị na-niile si na-emeso otu, n'ihi na anyị na-niile kere Imago Dei. Otú ọ dị, anyị dị iche iche, na nke ahụ bụ dịkwa mma! M ọkara nwa, ọkara ọcha, na nwere a ton nke “black àgwà,” na “ọcha àgwà.” Na na na. Nke ahụ mara mma! Olileanya ha na-egosi anyị ihe banyere Chineke! M votu maka ememe ma na-amụta dị iche kama colorblindness, na a ezi ememe nwere ike na-eme gospel.
Nate • December 6, 2014 na 2:45 pm • zaghachi
Your okwu sitere n'ike mmụọ nsọ m ka m dee a song eji a mgbanwe nke okwu gị: “Anyị na-niile kere Imago Dei, Otú ọ dị, anyị dị iche iche na nke ahụ bụ ihe karịrị OK”. Daalụ maka gị ụzọ na-ekwu okwu na ebua amamihe. The ike nke song ka tụgharịa si gosi na ya dị kpere na-erughịrị mmadụ onyinye nke okwu anyị n'otu di iche iche na n'ime Kraịst.
Grace na Peace,
Nate • December 6, 2014 na 2:46 pm • zaghachi
Ndo….*Tory *….bụghị Tori.
igwe-elu • December 4, 2014 na 10:53 Abụ • zaghachi
Kwuru nke ọma Jordan. M ga-asị onye nke a ihe: Kama ịbụ colorblind, ike anyị kama ịhụ anyị dị iche iche agbụrụ dị ka Chineke creativity? Anyị na-eguzo na Ya n'okpuru aha nke Jesus. Ọ bụ anyị banner – n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na anyị na-na-na na site na Ferguson, Cali, Oregon, Alabama ma ọ bụ New York. Jizọs bụ anyị gbadoro ụkwụ. Na na a na omenala nke chọrọ ikewapụ anyị n'ime “amachaghị” na iche iche iche iche, anyị na-eguzo dị ka Kraịst ahụ, n'okpuru Ya.
Ma, m na-eme na-ekele gị ghọta na song. Daalụ maka iwu Alaeze elu n'ihi ebube-Ya!
Josh • February 2, 2015 na 1:09 pm • zaghachi
njem, ekele maka ndị a echiche. M na-ekele gị na-ekere òkè gị ahụmahụ dị ka a nwoke nke na agba na-eche onye ọ bụ na ihe mwute ikwu anyị omenala site Lens nke Gospel. Ka Jehova nọgide na-ewu Alaeze ya na ama site ọrụ gị. Daalụ.
Gabriel • December 4, 2014 na 2:13 Abụ • zaghachi
Daalụ njem, ị a ezi ihe nlereanya na n'ike mmụọ nsọ. Na-elu na-arụ ọrụ ọma na-adabere na Jehova nduzi.
Michael • December 4, 2014 na 5:17 Abụ • zaghachi
Ọ na-mwute na-agụ niile ihe na-aga ugbu a na ụwa. Right site NYC na Kenya. Painfull mbipụta ma anyị adịghị amụta ihe site ha ma na-eme otu ihe ahụ. Ọ bụ oge anyị na-n'ezie ghọrọ ụmụnna anyị ndị na-eguzosi
Michael • December 4, 2014 na 6:01 Abụ • zaghachi
njem Lee, nke a nwere ike ọ bụghị na-na a dị iche iche oge. Anyị kwesịrị imesi n'ókè ọzọ na site niile pụtara #couldabeenme
Cristella • December 4, 2014 na 6:05 Abụ • zaghachi
Ekele gị njem maka blog post na nwa
Richard • December 4, 2014 na 7:37 Abụ • zaghachi
n'ezie mwute ịnụ, ka ike n'ezie n'echiche otú y'all eche ma m na-ahụ na a ọtụtụ nke nwa ppl dị nnọọ na-dị nnọọ n'ezie ngwa ngwa… inwe mwute maka u al, M na-eche na ike adịghị na niile…
Richard • December 4, 2014 na 7:38 Abụ • zaghachi
*dị nnọọ = ekpe ikpe
Todd • December 4, 2014 na 7:48 Abụ • zaghachi
okwu dị ike, mara mma deere. Emebi afọ m anya mgbe m dịghị atụ anya ya. M naanị chọpụtara na nso nso gị music na ọ dịla a ebube inspirational chọpụtara n'oge na ndụ m Chineke weere ya otú. Ọtụtụ otuto gị, nwanna nwoke.
Louis • December 4, 2014 na 8:09 Abụ • zaghachi
Nke a bụ a ezigbo mkpuru, njem.
Kish • December 4, 2014 na 8:14 Abụ • zaghachi
A n'anya song! My olileanya na ya onwe ya kwa!! Nyere anyị NNA!!!
aha: New Music: njem Lee – “Coulda Na Me” |
Robert • December 4, 2014 na 9:42 Abụ • zaghachi
Atụkwasị Chineke Obi na Nọgide Na-eme Ezi Njem! Meenụ ka ìhè unu na-enwu.
Amanda • December 4, 2014 na 12:51 pm • zaghachi
Iji na-ekwu na Chineke adịghị ahụ agba bụ unbiblical. (Jordan) The Bible na-ekwu na Chineke kere dị iche iche mba na asusu ka ngosi Ya ebube. Anyị ekwesịghị hà na ọ dịghị adị! Ọ bụrụ na ị na-ekwu na ị chọrọ ịbụ na e nwere maka a kwere ekwe na-emekọ ihe ndị a site n'ekpere ma ọ bụ ihe ọ bụla uzo ihe ị na-agbalị ka na-arụ ụka ya song? Ọ na-ekere òkè ya ewute. ya mgbu. Stuff na nwa ndị mmadụ, na-aga site. Gịnị mere i ji enwe obi ná mma maka ya na-asị na. Gịnị mere gị ONE atụ nke a ọjọọ ahụmahụ na-achị achị ma ọ bụ ghara ịdị ire na-ewute na obi nkoropụ na ọtụtụ ndị isi ojii nwere ihu kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị na onye oge. My di mgbe niile nwere na-aga karịa iji jide n'aka na ọ ga-abịa dị ka ndị na-abụghị egbu ndị mmadụ!! Gịnị mere? Gịnị mere na ọ bụ nwa ya mere, ọ na-ewere egwu na-eyi egwu. Gịnị mere na ọ na-akọ ikpoputa na ndị mmadụ na-eche na ha kwesịrị ime ka ndị comment, ha ha ị na-adịghị ihe m na-atụ anya, ma ọ bụ na ị bụghị dị ka ndị ọzọ na nwa ndị mmadụ. Ime ndị na-aga ruo ị na na-na ha na-idem ụzọ ị na-asụ? Kwụsị maka a min na dị nnọọ ịnụ ndị mmadụ, ị na-adịghị na-ekweta ma ọ bụ ịghọta. Dị na-egosi ụfọdụ mmetụta ọmịiko ma na-enyere na-a akụkụ nke ihe ngwọta! Daalụ maka ekere òkè gị obi Njem Lee.
Abigail • December 4, 2014 na 1:28 pm • zaghachi
njem, nke a dị mma.
My obi na-emekpa n'ihi na e nwere ka a mere na-dee songs dị ka nke a. A ka nwere a agha n'ihi na nwa ndụ.
Ma eleghị anya, otu ụbọchị na anyị nwere ike ime ka ọ na nri.
ga- • December 4, 2014 na 2:44 pm • zaghachi
Na-elu na-arụ ọrụ ọma Njem! Okwu gị na onye àmà gị ndị dị ike! Ka Jehova gọzie gị, na-ị, mee nweta ihu ọma ya na ị na!
Tyrone • December 4, 2014 na 3:45 pm • zaghachi
Charlotte • December 4, 2014 na 4:25 pm • zaghachi
Njem Lee nwoke,
Enwere m ike dị nnọọ ikwu na emewo m n'anya bụ isi ezigbo na olu gị?! Ahh ọ bụ otú ndu na ezigbo! Nke a bụ oké feat. Bro. nnọọ eziokwu, M nnọọ wutere ịnụ banyere niile nke ire ure na nke e gosiri ebe a na ikuku na ọ bụ crazy otú echiche ọjọọ na isi n'ala ụwa a nwere ike ịbụ – Dị m wutere m agbụrụ na nke a stereotyped na broadcasted n'elu. The video si Brooklyn NY bụ otu n'ime ndị kasị ihe ndị dị mwute na m na hụrụ na a ogologo oge.
Victoria • December 4, 2014 na 4:28 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya ihe Jordan na-ekwu. Mụ onwe m bu a black America, a nwaanyị, ma m na uche, okike anaghị egwu a nnukwu ọrụ, black nwaanyị nwere ike iche na na ikpa oke na ụzọ nwekwara. M mgbe e ezubere iche onwe maka agba nke m na akpụkpọ, ma na-amasị m na-eche na m ga dịghị mgbe asị ma ọ bụ na-achọ ihe ọjọọ onye na-emerụ m ma ọ bụ igbu m na a ọnọdụ dị ka ndị anyị na-ekwu okwu banyere. N'ịbụ a Christian, M na mgbe niile na-echetara nke amaokwu ebe Jizọs na-agwa anyị na-atụgharị ntì nke ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ kpọrọ asị asị na ị na, ị hụrụ ha n'anya n'agbanyeghị na. Racism ga-akwụsị na-eme, ma ọ bụrụ na mmadụ na-awakpo gị, atụgharị ntì nke ọzọ. Ị gaghị eme onye ọ bụla na-anabata gị, stof ka a na-agaghị akwụsị. Ma, anyị kwesịrị ịkwụsị iche na ojii bụ naanị mba ezubere iche. The naanị ihe dị iche bụ, na-acha ọcha na nwa mpụ bụ naanị mpụ a na-azụlite na ozi ọma. Gịnị banyere a ọcha Ihọd na-egbu a Hispanic? Ma ọ bụ ihe Asian egbu a black? Anyị na-niile e kere dokwara. Ee, e nwere oge mgbe ohu niile black na ndị mmadụ maara, ma taa e nwere ohu na ịkpa ókè agbụrụ na-eme n'etiti agbụrụ nile. Chineke adịghị ahụ ọnwụ nke ndị a na nwa mmadụ ọ bụla dị iche iche ka ọ na-ahụ ọnwụ nke onye ọ bụla ọzọ. Echere m na anyị na-echefu na echiche, dịghị ndụ mmadụ mkpa karịa ọzọ. Na ka nwekwara ghara ichefu na anyị n'ezie amaghị kpọmkwem eziokwu nke a mpụ. njem, M na-adịghị asị gị song na niile, ọ dị oké na onye ọ bụla nwere onwe ha chere na nke a bụ nke gị. Ọ bụ ezie na, M ga-ekwu, ee, ọ nwere ike na na na na ị na, ma ọ na-nwere ike na na na a na-acha ọcha nwoke. Anyị black ndị na-abụghị nanị na zaa. Ka anyị na-agbalị ịhụ onye ọ bụla ọzọ ka Chineke si ahụ anyị, 100 percent hà.
Danielle • December 4, 2014 na 10:02 pm • zaghachi
Dị ka a biracial, agba ìsì(Ee, n'ihi na m na-nketa na omenala na-agụnye ọtụtụ dị iche iche agbụrụ na-amalite na-elekwasị anya otu otu. M na-eme ememe ha ihe ọ bụla na-erughị) nwaanyị m ike were ihe ọ bụla nke a na nwa mmadụ na-site na. Karịsịa mgbe ndị mmadụ na-awụlikwa elu ogologo na agbụrụ na-ahapụ Chineke si na ya. Ma na m na obi ụtọ na ị na-etinye Chineke ya ebe ọ bụ. Ọ bụ na nke a ọnọdụ, Ọ bụ dị ka Justice enye n'anya. Anyị bụ nke na-atụkwasị ya.
Ryan • December 4, 2014 na 10:49 pm • zaghachi
Anthony • December 7, 2014 na 10:20 pm • zaghachi
M na-egwuri a song for a ụlọ nke ndị mmadụ jupụtaburu agbalị ịnụ ụmụnna ha ákwá ụnyaahụ. E nwere ihe 18 nke anyị na 6/8 ndị na-acha ọcha. Okwu gị sikwuo ihe.
Mara na gị okwu na-eru ndị mmadụ ke miri, mara mma ụzọ. Daalụ maka gị n'eziokwu echiche.
Johnny • August 13, 2015 na 7:36 pm • zaghachi
Ọ bụrụ na ị na-eme nke a banyere onwe gị ma ọ bụ banyere a kpọmkwem agbụrụ mgbe ahụ, ọ nwere ihe ọ bụla na-eme na Chineke. Your song naanị-egosi ihe mere ịkpa ókè agbụrụ nke na-aga n'ihu n'ụzọ ọ na-eme n'ihi na ọ dịghị onye dị njikere ịgbanwe okirikiri naanị ákwá banyere otú ha na-emeso-agụghị oké ọcha, Mexico, Asian, mmadụ na-anwụ na otu ụzọ oge niile site n'ịgba mpụ, a na-kwụsịrị onye anyị nabatara dị ka a n'echebe. Your ma n'ihi na ikpe ziri ezi kpamkpam ma ọ bụ na ị bụghị na ọ dighi ezi edoghi ma ọ bụ ngọpụ. Ị welite egwu na iwe, Gods bụghị ndị ka ị na-ahọrọ na-. Ị na-ebute Chineke na nke a g nnọọ otú Kraịst na-ege ntị gị kama mgbe na-eme ka nri ịkwụnyere Chineke kama gị anyị lyrics asị gị etinyecha-ebili ka ịkpa ókè agbụrụ na gị aga-eme ka tis song banyere ịkpa ókè agbụrụ na bụghị Chineke. Ị gaghị na-anọdụ n'ụlọ 2 tebụl ị ma nọdụ na tebụl ma ọ bụrụ na Nna ma ọ bụ ị na-anọdụ na tebụl nke dara. Nke ọ bụla ọ na ị na-efu a na-akwado. M na-atụ gị nwere ike-abịa okwu na gị egwu na-ahụ otú mfe ùgwù ga-agbanwe egwu n'ime akọrọ nkwanye ùgwù na-arụ ọrụ ọnụ. Ọ bụrụ na ọ coulda kemgbe ị, mgbe ma eleghị anya mkpa ka ị na-echegharị echiche ndụ gị nhọrọ.
Jon • August 17, 2015 na 12:00 Abụ • zaghachi
Ọ bụghị megide cops nri? Echeghị m. M n'anya njem na ike na-eche ruo ya ọzọ album, mgbe ọ bụla na ma eleghị anya,. Great song.
aha: 257 || Ezigbo Njem Lee, M Nụrụnụ Ị – akụri Magazine
Kianna • Ka 20, 2016 na 4:30 pm • zaghachi
M nnọọ ntị nke a song na lyrics ndị dị ike. “Ebe bụ olileanya unu na?” -njem Lee. M n'anya ya!
Mark • November 21, 2016 na 6:43 pm • zaghachi
Ime ihe niile m na ụmụnne m, ndị nwanyị, nkụda mmụọ, na-emejọ. ọ dị m nwute. M a akụkụ nke a dị ka onye American. Ma m na-ege ntị. M na-anụ ihe mgbu gị.
ọ dị m nwute.
The okwu na-na-esi. Ọ dịghị ndị na-akatọ, naanị ịhụnanya.
Pịa ebe a iji kagbuo zaghachi.
Lelee video maka Sweet Victory si Njem si ọhụrụ album, ebili
Millennials na nke agbụrụ ná mma
Nke a bụ Njem okwu site na ERLC Summit on the Gospel na nke agbụrụ ná mma. N'okpuru ebe a bụ ihe odide site na ozi. na mgbede a, M na a jụrụ ikwu okwu banyere Millennials na nke agbụrụ ná mma. Na m na-eche ihe ùgwù guzo n'ebe a na-eje ozi dị ka akụkụ nke a dị ịtụnanya mgbalị kwupụta ịdị n'otu na Chineke ụka. dị ka a
Gịnị Isiokwu in Book kwuo?
Na Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili, ọ gbalịrị dee banyere ihe ndị na-mkpa ka ọgbọ a. Ekiri ka ọ na-ejegharị site na ụfọdụ nke isiakwụkwọ na-enye a sinik ọgụgụ kasị elu na ọdịnaya.
"Njem e dere ede a akwụkwọ na m na-eche ọ bụla na-eto eto kwesịrị ịgụ. Ya ahuhu n'ihi na Jizọs na ọgbọ a na-abịa site lewe gị anya na bụla na peeji nke. M ike na-eche ịhụ mmetụta a na ozi nwere on a ọgbọ nke ahụ bụ agụụ na-agụ maka nzube. "- Lecrae, Grammy awarding- emeri artist @lecrae "Bilie bụ a
Piper si Rise N'okwu mmalite
Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili, bụ now! -Agụ John Piper si Okwu mmalite nke akwụkwọ n'okpuru. Ị nwere ike tupu-iji akwụkwọ na chọpụta ihe ndị ọzọ na Risebook.tv Otu n'ime isi ihe ndị na-amasị m banyere Njem Lee ya na akwụkwọ, ebili, bụ interplay nsọpụrụ na mkpa. Ebumnuche na mkpa na American omenala bụ nkịtị.
Njem Lee Facebook
Njem Lee Twitter